ukwelapha i-ovarian cyst
Abesifazane abangaphezu kuka-157,000 emhlabeni wonke baye baphumelela ekwelapheni ama-Cysts abo e-Ovarian Ezinsukwini ezingama-30-60 , futhi balinganisa umsuka we-PCOS Ukusebenzisa i-Ovarian Cyst Miracle ™ System!
Umcwaningi wezokwelapha, impilo engcono kanye nokudla
Uchwepheshe, Umxhumanisi wezeMpilo kanye namaKhosi ase-Ovarian asekuqaleni
Umhlupheki Ufundisa Wena Indlela:
Ukuqeda ama-Cysts akho ama-Ovarian ngokwemvelo kungakapheli 2 inyanga
nokuvimbela ukuphindaphinda kwabo
Tackle Ama-Cysts Ovarian Ubuhlungu, Ukuvimbela nokuphuza
Ngamahora angaphansi kwama-12
Thuthukisa Ukwelashwa Kwakho Nokuthola Izikhathi Zokuvala Iwashi
Ukubhekana nazo zonke Izimpawu ze-PCOS
Thola Ukulinganisela Kwakho Ngokwemvelo
Thuthukisa izinga lokuphila kwakho ngokumangalisayo!
Thola ukuthi Wawaqothula kanjani ama-Ovarian Cysts futhi
Ufundise Izinkulungwane Zomama Emhlabeni Wonke Ukuphatha
Ama-Cysts abo e-Ovarian kanye nezindaba ze-PCOS Ngokushesha, Ngokuphepha futhi
Ngisho noma unayo ama-Ovarian Cysts amakhulu kakhulu
Ngisho Uma Une-Endometriosis
Ngisho Uma Ungumama
Ngisho Uma Unama-Cysts Amaningana
Ngaphandle kokuhlaziya izidakamizwa noma izinqubo zokuhlinza
Ngokushesha Kunalokho Owake Wazicabanga!
nguCarol Foster- Uchwepheshe Wezokudla, Umxhumanisi wezeMpilo, uMcwaningi wezeMpilo noMlobi
Ingabe unzima ukuphatha ama-cysts akho ama-ovarian? Ingabe ubuhlungu, noma uzizwa ukhathazekile ngenxa yokuthi awukwazi ukubhekana kahle ne-cysts yakho yama-ovari naphezu kwakho konke okusemandleni akho ? Ingabe uhlangabezana nezinkathi ezingavamile, ubuhlungu esiswini sakho esingaphansi noma ukuvimbela? Ingabe ukwesaba ukukhula komdlavuza noma ukungakwazi ukuba nezingane? Uma uphendule ebo, ake ngitshele ukuthi ngiyazi kahle indlela ozizwa ngayo, ngoba mina ngokwami ​​ngiphambene nakho okufanayo eminyakeni edlule. Ngiye ngilwa nama-cysts angapheliyo ama-ovarian iminyaka engaphezu kweyishumi kuze kube yilapho sengifinyelele ukwelashwa, ngibhekane nama-cysts aphindaphindiwe e-ovarian engangihluphekile futhi ngakhulelwa kabili futhi manje ngingumama oqhoshayo wezingane ezimbili ezinempilo.
Usuzokwazi ukuthola ukuthi yini okungenzeka ibe yindlela yokwelapha yama-cysts enamandla kunawo wonke owake waphuthukiswa. Yisimiso esifanayo izinkulungwane zabesifazane, njengawe, ezazijwayele ukwelapha ama-cysts azo nama-PCOS, zikhulelwe ngokushesha futhi zibelethe izingane ezinempilo.
Igama lami nguCarol Foster futhi eminyakeni engaphezu kwengu-14 eyedlule, ngokusebenzisa inqubo ende yokuhlolwa, iphutha nokuhlolwa, ngithuthukise uhlelo oluqinisekisiwe olwenziwe ngomlilo oluyi-100% oluqinisekisiwe, olunikezwe amahora angama-60,000 + okunomsoco ubuchwepheshe kanye nokucwaninga kwemithi ephelele yokwelapha zonke izinhlobo zama-cysts ama-ovari nama-PCOS ngokushesha futhi ngokwemvelo. Lokhu kuyisimiso esingajwayelekile, esiyingqayizivele futhi esineqile kakhulu ye-ovarian cysts yokuphulukisa, okuyinto abesifazane abambalwa abayazi ukuthi ikhona ...
Uma ungathanda ukufunda indlela yokwelapha ama-cysts ama-ovari ngokushesha futhi ngokuphepha ... ngaphandle kwezidakamizwa, ngaphandle kokuhlinzwa okuyingozi, ngaphandle kwemithi yokwelashwa yama-ovarian ejwayelekile, futhi ngaphandle kwemiphumela emibi, khona-ke lokhu kuzoba yincwadi ebaluleke kunazo zonke oyoke ufunde. Ngiyaqinisekisa futhi ngithole imiphumela yokufakazela!
Indaba Ephumelelayo # 1: Joanne Spacey
"I-cyst yami yama-ovari yanyamalala ... ngokuphelele!"
"Ngithandekile uCarol, angazi ukuthi ngabe ngabe ngenzile ngaphandle kosizo lwakho. Ngineminyaka engu-32 ubudala futhi cishe ezinyangeni ezingu-7 edlule udokotela wami waqinisekisa ukuthi ngine-cyst yama-2.9" yama-ovarian ngemva kwamasonto amaningi okungaqondakali kodwa okungaqondakali. Ngithathe imishanguzo yezokwelapha kanye nemithi yokuvimbela imithi ngamasonto amaningana ukuze ngithole ukuthi i-cyst yami yakhula yaba ngu-3.4. "Udokotela wami wabe esikisela ukuthi ngisuswe i-cyst yami futhi ngitshele nokuthi ukususwa kwe-ovary yonke efanele kungadingeka. Kwakuyinto engabonakaliyo. Umcabango wokwenza isisu sami ususwe futhi ungalokothi ngikwazi ukuba nezingane engacabangeki.
Lapho ngifika ekhaya, ngagcwalisa inetha ngifuna izimpendulo ngenxa yokuphelelwa yisikhathi, njengoba ngathola indawo yakho (ngukukholwa?). Ngesikhathi ngangiqala ukungabaza, ngathola ithuba futhi ngalawula incwadi yakho emangalisayo. Ngaqala ngokushesha isinyathelo 1 futhi ngilahla lezo mithi ezimbi nezinzalo zokukhulelwa. Ezinsukwini ezingaphansi kwezinsuku ezingu-5, ubuhlungu ngakwesokudla sami kwakuyi-GONE futhi ngangizizwa nginhle kakhulu. Ngemva kwamasonto ayisikhombisa nangemva kokuqeda isinyathelo sesi-3 sohlelo lwakho, udokotela wami wenza enye i-ultrasound futhi ngimangala kakhulu uma i-cyst yami yama-ovari iphela ... ngokuphelele!
Namuhla, noma nini lapho ngizwa abesifazane bekhuluma ngama-cysts ama-ovari ngifuna ukugijima ngiwatshele mayelana nesistimu yakho. Ube umngane weqiniso yonke indlela futhi anginawo amagama okubonisa ukubonga kwami. UNkulunkulu akubusise! "Ngo-Ephreli 2006
- Joanne Spacey, iminyaka engu-32, 3.4 "iCyst (eCalifornia, eU.SA)
Izithombe ezingezansi ziyizithombe zikaJoanne Spacey , omunye wamakhasimende ami avela eU.SA Lezi zithombe zibonisa ukuthi ngokushesha futhi ngokumangalisayo ama-cysts akho ama-ovari angaphula ngokulandela uhlelo oluphelele lwesinyathelo ngesinyathelo ngaphakathi kwe-Ovarian Cyst Miracle ™.
Indaba Ephumelelayo # 2: Donna Hobbs
"Manje, ngemva kwamasonto ayishumi, i-ultrasound ithi konke. Nginguye
ekugcineni mahhala kuma-cysts ami ama-ovari. Yeka impumuzo! "
"Sithandekayo uCarol, ngifuna ukukubonga futhi ngixoxe ngendaba encane. Ngineminyaka engu-38 ubudala futhi ngifisa sengathi ngabe nginolwazi lwakho ngo-2006 lapho ngilahlekelwa i-ovari ngenxa yokuthi
ezinkulu 4.2 "i-cyst ovarian.
Ngisho noma ukuhlinzwa kwahamba kahle, ngisathuthuka ama-cysts amabili ama-ovarian asezingeni eliphakathi kwezinyanga ezingu-11 kamuva (ngifake le-ultrasound kulo mlayezo) kanye nokuhlaselwa okubuhlungu okungazelelwe emhlane nasemuva ongakwesokudla. Ngisendleleni yokuhlinzwa futhi futhi manje nginqume ukuya empini. Kwakungekho neze indlela engangiyolahlekelwa ngayo enye i-ovary yami. Ngenhlanhla, umngane wakho watusa iwebhusayithi yakho futhi emva kokufunda okufishane ngangazi ukuthi lokhu yilokho engangikuthandazela.
Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa zokulandela uhlelo lwakho, ngiye ngafaka bonke ababulali obuhlungu. Angizange ngisadinga futhi. Ngeviki le-7 ngazizwa ngingcono kunalokho engangizizwa eminyakeni. Manje, ngemva kwamasonto ayishumi, i-ultrasound ithi konke. Ekugcineni ngikhululekile kuma-cysts ami ama-ovari. Yeka impumuzo! Inkosi ikubusise!"
- UDonna Hobbs, u-Age 38, 2.5 "i-Cyst (e-United Kingdom)
Izithombe ezingezansi ziyizithombe zikaDonna Hobbs , omunye wamakhasimende ami avela e-UK Lezi zithombe zibonisa ukuthi ngokushesha futhi ngokuphawulekayo ama-cysts akho ama-ovari angancibilika ngokulandela isimiso esiphezulu nesinyathelo esingaphakathi kwe-Ovarian Cyst Miracle ™.
Indaba Ephumelelayo # 3: Renne Burgio
"Udokotela wami uthi i-cyst yami isivele. Angikwazi ukuchaza
Yeka indlela engizizwa ngayo ngokubheka imiphumela ye-ultrasound "
"Ngithandekayo uCarol, ngathola ukuthi nginama-cysts angu-1.8" ama-ovarian futhi ngithatha amaphilisi okulawula ukubeletha ngokusikisela kukadokotela wami. Kwaphela amaviki nezinyanga kodwa i-cyst yami yama-ovari yayisendlini (nakuba yayisayizibukhulu obufanayo). Ngabe ngithola incwadi yakho emangalisayo.
Phakathi nesonto lokuqala lokulandela uhlelo lwakho, ngaqala ukuzwa kangcono kakhulu futhi ubuhlungu buqala ukuphela. Kwakuyimilingo. Ngemva kwamasonto ayisishiyagalolunye, udokotela wami uthi i-cyst yami isivele! Angikwazi ukuchaza indlela engizizwa ngayo ngokubheka imiphumela ye-ultrasound.
Ngifisa sengathi bonke abesifazana bayazi ngale ndlela. Kukhona abesifazane abaningi abangenathemba ngaphandle lapho abangaqapheli ukuthi kukhona inkinga yemvelo yale nkinga.
Ngizotusa ngenjabulo lesi simiso esimangalisayo kubo bonke abangane bami. "
- URenne Burgio, iminyaka engu-27, 1.8 "iCyst (eFrance)
izimbangela ze-cyst ovarian
Izithombe ezingezansi ziyizithombe zikaRenne Burgio , omunye wamakhasimende ami avela eU.SA Lezi zithombe zibonisa ukuthi ngokushesha futhi ngokuphawulekayo ama-cysts akho ama-ovari angaphula ngokulandela uhlelo oluphelele lwesinyathelo ngesinyathelo ngaphakathi kwe-Ovarian Cyst Miracle ™.
Indaba Ephumelelayo # 4: Amabhuloti e-Matilda
"Ngithathe izivivinyo ezimbili ze-ultrasound ezinyangeni eziyisithupha zokugcina futhi kokubili kubonise ngokucacile ukuthi ngingu-ovarian cyst mahhala!"
"Ngithandekayo uCarol, Uhlelo lwakho luye lwabenza izimangaliso kwi-cyst yami ye-ovari. Ngasatshiswa kakhulu ngenxa yokuhlinzwa ukuthi kwakudingeka ngithole isisombululo somswakama wami wesobunxele wamandla angu-3.24 (futhi ngangine-cysts ezincane eziningana i-ovary yami efanele) ngakho ngalalela incwadi yakho futhi ngaqala ukuqala ukusebenzisa zonke iziphakamiso zakho ngokuphikelela. Angikaze ngikholelwe ngokuqinile endleleni ehlukile yokuphulukisa kodwa isebenza !. Ngithathe ukuhlolwa kwe-ultrasound ezinyangeni eziyisithupha zokugcina futhi kokubili kubonisa ngokucacile ukuthi ngingu-ovarian cyst mahhala! Angikwazi ukukubonga nje ngokwanele ngosizo lwakho. Ngizizwa ngikhululekile futhi nginempilo. Ezinye izinkinga zezempilo engizihluphekile nazo zancipha.
- Matilda Bates (oneminyaka engu-58) uNebraska (USA)
Indaba Impumelelo # 5: Elizabeth Marr
"Ngiyajabula ukusho ukuthi i-cyst yami ye-ovariy iyinto into
esidlule futhi ubuhlungu obuqhubekayo nokukhathazeka sekuphelile. "
"Ngithandekayo uCarol, ngibonga kakhulu futhi ngithokozile ukwazi ukuthi othile usithole isixazululo enkingeni enjalo ephazamisayo kuleli zwe! Kunabesifazane abaningi ababhekene nalesi simo! Ngonyaka odlule ngitholwe ngine-2.6" i-cyst futhi sitholile isayithi lakho kodwa angingaqiniseki ukuthi isistimu yakho ingangisiza. Ngangikhubazekile ngokwesaba.
Kwaphela izinyanga ngangihlukunyezwa nobuhlungu ngisebenzisa zonke izinhlungu zokunciphisa izidakamizwa okwangenza ngazizwa ngibi kakhulu. Ngolunye usuku lapho ubuhlungu bufinyelela emkhawulweni omusha, nganquma ukuhleleka uhlelo lwakho nemiphumela akuyona into emfushane kakhulu. Unginike ukusekelwa engangikudingayo ukwenqaba ukuhlinzeka ngaleso sikhathi futhi ngizame yonke indlela yemvelo.
Manje, ngiyajabula ukusho ukuthi i-cyst yami yama-ovariyinto yesikhathi esidlule futhi ubuhlungu obukhulu nokukhathazeka sekuphelile ... ngizizwa ngiphilile futhi nginamandla. Kuyaphawuleka. Lesi yisiqalo esisha kimi. Udokotela wami wayejabule lapho ngimtshela ngohlelo lwakho, waphakamisa ishiya lakhe isikhathi esingaphezu kwesinye kodwa imiphumela ye-ultrasound ikhulumela yona.
UCarol, ngifuna ukubonga ngokuhlanganyela loluhlelo oluhle ngethemba lokuthi wonke owesifazane uzothola lolu lwazi olubalulekile. Ngizizwa ngivuselele futhi nginenhlanhla ukuthola uhlelo lwakho. Ngimangalisa futhi ngibonga ngokuthi umkhiqizo wakho usebenze ngokushesha futhi kahle. "
- Elizabeth Marr, Age 44, 2.6 "I-Cyst (eLondon, UK)
Indaba Yempumelelo # 6: Krista Persin
"Ngizizwa ngiphilile futhi ngilawula okokuqala ngami
ukuphila !!! "
"Sawubona uCarol, ngineminyaka engama-39 futhi nginezinkomba eziningi ozibonisayo ukuthi yi-manifestation ye-PCOS. Ngiphinde ngifakwa ukuthi ngine-4.5" cyst ovarian "enkulu.
Udokotela wami wayekade ephikelela ukuthi ngizohlinzwa kodwa ngemva kokuzwa zonke izindaba ezesabekayo mayelana nezingozi zokuhlinzwa, nganquma ukuzama uhlelo lwakho.
Ngisekholweni lwakho ngamasonto ayisithupha futhi ubuhlungu abuzange buphela nje, ngilahlekelwa isisindo esiphezulu, izimpawu eziningi ze-PCOS ezaqala ukuphela futhi i-ultrasound engiyithathile izolo izobonisa ukuthi i-cyst yami yayisimangele kakhulu, kumane kumangalisa. "
- Krista Persin, yobudala 39, 4.5 "iCyst (eMelbourne, e-Australia)
Indaba Ephumelelayo # 7: Joyce Coe
"Iminyaka emibili ngaphandle kwe-Cyst Ovarian!"
"Sithandekayo uCarol, Sekuyiminyaka engu-2 ngaphandle kwe-Cyst Ovarian noma ubuhlungu. Ngifuna nje ukukulahla inothi lokubonga ngokukwabelana ngolwazi lwakho nokusiza abesifazane esimweni sami.
Njengoba ukhumbule, eminyakeni emibili edlule ngaqala uhlelo lwakho emva kokuba ngitholiwe ngine-corpus luteum cyst futhi uhlelo lwakho lwangenzele izimangaliso. I-cyst yami yama-ovari yanyamalala ngamasonto angaphansi kuka-10, ngilahlekelwa amapounds angu-10, futhi izimpawu ze-PCOS engivame ukuzisebenzisa ukuze zihlupheke nazo ziyinto yesikhathi esidlule. Ngiyazi ukuthi ngeke ngiphinde ngidlule kulokho futhi.
- Joyce Coe, iminyaka engu-32, 2.4 "i-Cyst (Naas, i-Ireland)
Indaba Ephumelelayo # 8: Dedra Robins
"Ngincoma ukuthi wonke owesifazane ufunda wonke umuntu
igama lale ncwadi, kungakhathaliseki ukuthi u-Ovarian wamanje ukhona
Isimo se-Cysts. "
"UCarol, ngifuna ukukhombisa ukubonga kwami ​​ngesekelo lakho elihle nangalesi simiso esihle. Ngifuna futhi ukubonga ngokubasiza kakhulu, ngomusa nokusekela. Izwe lingasebenzisa abantu abathembekileyo abanjengawe. Izinyanga ngiye ngilandela ngokuqinile uhlelo lwakho lwesithathu lwesinyathelo.Ngemva kwamasonto amathathu ngiqale ukufaka imiphumela emangalisayo. Ubuhlungu bokugwaza buye bufinyeleleka kuncenye yalokho okwakukhona ngaphambili. Ngizizwa kangcono kakhulu futhi ngiziqhenya kakhulu ukuthi nginguye ngisendleleni yokubuyisela esimweni sami se-PCOS ngaphakathi ngaphakathi kunokuba ngisebenzise indlela yokuphumula yesikhashana. Ngincoma ukuthi wonke umuntu kufanele afunde yonke igama elilodwa leli bhuku, kungakhathaliseki isimo sakhe samanje se-Ovarian Cysts. Lolu lwazi kufanele lithathwe ngokungathí sina. Ukulawula umzimba wakho nempilo yakho, kuyadingeka uma ukhathalela ngempela impilo yakho yesikhathi esizayo kanye nekhwalithi yokuphila kwakho. "
Ngiyabonga! Ngiyabonga! Ngiyabonga!"
- UDedra Robins, iminyaka engu-30, 2.1 "iCyst (e-Ohio, eU.SA)
Indaba Impumelelo # 9: Susan Lemos
"I-ultrasound yokugcina engiyithathile yayibonise ngokucacile i-cyst yami
bekungasekho. Ukuhamba ngokuphelele! "
"Sawubona uCarol, ngineminyaka engu-28 futhi ngilwa ne-Ovarian Cysts ezinzima ezinyangeni ezingu-8 ezidlule. Izinyanga ezimbili nengxenye edlule, ngakhubekisa uhlelo lwakho lwe-Ovarian Cyst Miracle. Ngangingabazi futhi angicabangi ukuthi kwakuyiqiniso Uhlelo lwamaCysts ami e-Ovarian noma ngabe lwaluzosebenza nhlobo, kodwa ngiyilungisile ngoba ngangizimisele ukwenza noma yini ukuze ngisuse lesi simo esilimazayo nesesabekayo.
Ngesikhathi sesonto eli-3, ngibone ukuthuthuka engangakaze ngikuthole nanoma yikuphi ukwelashwa ngokwemvelo noma okubizwa ngokujwayelekile. Ubuhlungu obungenayo ukumisa nokuzwa kokugcwele esiswini sekuhambile. Isikhumba sami sibheka kangcono kakhulu futhi i-ultrasound yokugcina engiyithathile yayibonise ngokucacile ukuthi i-cyst yami isiphelile. Kuye ngokuphelele! Ngizizwa ngiphilile, futhi.
Ngiyabonga futhi uNkulunkulu abusise! "
- Susan Lemos, iminyaka engu-28, 4.1 "iCyst (Dublin, Ireland)
Indaba Ephumelelayo # 10: Rebecca Fitzpatrcik
"Kuye kwaba amasonto amabili okuqala ohlelweni kodwa mina
Ngibonile kakade ukuthuthukiswa okuqondile ku-ovarian yami
ubuhlungu be-cyst kanye nezimpawu ze-PCOS. "
"Incwadi enkulu! Ngiyavuma ngokugcwele izimpikiswano eziningi encwadini ikakhulukazi lezo mayelana nezindlela ezijwayelekile zokwelapha ama-Ovarian Cysts.
Ngangifuna ukukutshela ukuthi ngizizwa kuhle kakhulu ukuthi awunazo umqondo. Ngizizwa nginamandla kakhulu. Sekuyimasonto amabili okuqala kulolu hlelo kodwa sengivele ngibona ukuthuthuka okuqondile ekuhluphekeni kwami ​​kwe-Ovarian Cysts kanye nezimpawu ze-PCOS. Ngikufisela yonke impilo nenjabulo emhlabeni futhi ngiyabonga kakhulu ngokungisiza. Ngiyazisa ngempela isikhathi sakho nemizamo yakho. "
- Rebecca Fitzpatrick, iminyaka engu-42, 1.6 "i-Cyst (i-Montana, e-USA)
Indaba Ephumelelayo # 11: Michelle Bowman
"Ngisuke ngikhululekile ekuhluphekeni okulimazayo kanye ne-cyst yami
ayisekho embonini ye-ultrasound! "
"Ngingowesifazane oneminyaka engu-47 ubudala futhi ngitholwe ngine-3.3" i-Ovarian Cyst ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Ngiye ngahlupheka kakhulu isikhathi eside nobuhlungu obuhambisana ne-cyst yami yama-ovari futhi ngibheka yonke indawo izimpendulo futhi ngizama yonke imithi kadokotela wami ayiphakamisile, kodwa akusizi ngalutho. I-cyst yami yayisekhona futhi ikhula ...
Ngibonga ukuthi ngithole isayithi lakho. Ubani obengakholwa ukuthi konke ukuhlupheka nokuhlupheka kwami ​​kungasuswa ngokuthatha izinyathelo ezintathu ezilula. Ngithole uhlelo lwakho izinyanga ezingu-4 ezedlule futhi ngaqala ngokushesha. Ngilandele zonke izincomo zakho ku-tee kanye nezixwayiso nemingcele yakho futhi sengivele ngikhululekile ebuhlungu obulimazayo futhi i-cyst yami ayisekho emibonisweni ye-ultrasound. Ngikwenzile ... indlela yemvelo. I-Ovarian Cysts isimo esibuhlungu esingatholakali ngaso sonke isikhathi noma ngesikhathi. Ngathokoza ukuthi ngithole le ncwadi efundisayo futhi ewusizo. Sekuyi-reference enhle kakhulu. Ngifisa sengathi othile unginike lolu lwazi eminyakeni edlule.
Ngiyabonga ngakho konke! "
- Michelle Bowman, iminyaka engu-47, 3.3 "uCyst (W. Virginia, eU.SA)
Yini eyenza le ndlela yokuqhuma kanjalo
Okuyingqayizivele ukuthi Ukunika Amandla Ukuze ...
Phatha ngonaphakade ama-Ovarian Cysts. Kuyinto eyiqiniso - abesifazane abangama-95% abasebenzisa ukwelashwa okuvamile balahla ama-cysts abo ovaniwe okwesikhashana futhi ngezinye izikhathi baqede kakhulu kunokuba beqala. Manje ungafunda ukuthi ungaba kanjani eqenjini le-5% eliphumelelayo elilondoloza kuze kube phakade. Qaphela ukuthi ukwelashwa okuvamile njengamaphilisi okulawula ukubeletha, ukuhlinzwa noma ngisho namakhambi e-cyclos ovarian homeopathic ngokuvamile ukubhekana nezimpawu ze-ovarian cysts kanye nokusebenza isikhathi esifushane. Iningi labesifazane ababethole ukuhlinza basebenze ama-cysts ama-ovarian ngezinye izikhathi emavikini ambalwa. Ungakholelwa lezo zingosi ezinikezela ukulungisa okusheshayo kuma-cysts ama-ovari noma i-PCOS. Ayikho iphilisi yemilingo noma i-fix-it-yonke umkhiqizo ukhona. Isixazululo engisinikeza manje yindlela ehlakaniphile, yesayensi eyenza i-PCOS ilawulwe futhi iqede ama-cysts ama-ovari angakapheli amasonto ambalwa (kuye ngobukhulu). Uhlelo lwami lubuye lufundise indlela yokuvimbela i-PCOS ne-ovarian cysts ukuphindaphinda. I-Ovarian Cyst Miracle ™ iyi-100% yemvelo, iphephile, futhi inamandla okwelapha okuqeda unomphela imbangela ye-ROOT ye-cysts yakho yama-ovari.
Phatha ama-Ovarian Cyst ngokugcwele. Kuyiqiniso-ama-cysts okuphulukisa ama-ovarian angeke atholakale ngokubhekana nesinye sezici eziningi ezibhekene nama-cysts ovari. Uma wake wazama ukuphatha ama-cysts akho ama-ovari usebenzisa ukwelashwa okukodwa njengamaphilisi okulawula ukubeletha, ama-progesterone creams noma izidlo ze-detox futhi wehlulekile mhlawumbe ngenxa yokuthi uhlangene nesici esisodwa sesifo. Akuzona nje ukuthi lolu hlelo luzokufundisa indlela kuphela yokuvimbela ukwakheka kwama-cysts ama-ovarian, uzofunda futhi indlela kuphela yokuphatha ama-cysts ama-ovari amahle-indlela ephelele.
Ukwelapha ama-Ovarian Cysts ngaphandle kwezidakamizwa noma izifo zokwelapha ze-Ovarian Cysts. Izidakamizwa, ama-creams kanye nokuhlinzwa okuyingozi ukuphatha ama-cysts ama-ovariya ngezinye izikhathi kusebenza ngandlela-thile futhi okwesikhashana kodwa imiphumela emibi ayinhle. Ama-cyst amancane ase-ovarian abaye bafunda indlela yokwelapha ama-cysts ama-ovariya ngaphakathi nangaphandle kokusebenzisa izidakamizwa noma ngaphezu kwezibalo yibo kuphela besifazane emhlabeni abagcina uhlelo lwabo mahhala ama-cysts ama-ovari nama-PCOS unomphela. Manje ungafunda lezi zindwangu ze-ovarian ziphethe izimfihlo ezivela kumuntu odla ukudla okunomsoco kanye nomuntu owayengumgulayo owaziyo kusukela ekuhlangenwe nakho kwezwe langempela ukuthi kwenziwa kanjani. I-Ovarian Cyst Miracle ™ ikhuthaza imvelo enempilo ye-hormonal and reproduction ngenkathi isusa ama-cysts akho ovunguvungu futhi ivimbela ukuphindaphinda kwabo ngokwemvelo nangokuphepha ngaphakathi kwamasonto angu-8.
What The Ovarian Cyst Miracle AKUKHO!
Uhlelo lwe-Ovarian Cyst Miracle aluyena omunye umuthi, ukulawulwa kokuzalwa noma ukwesezela. Akuyona ukudla okujwayelekile kanye nezinhlelo ze-herbal supplementation noma enye ikhilimu noma ngaphezulu kwemithi yokwelapha iningi labesifazane elidlulayo. Akuyona inqubo yezokwelapha noma. Indlela ehlukile kakhulu yokuhleleka kanye nokuhleleka kwezinhlelo zokuphatha zonke izinhlobo ze-cysts ze-ovarian nokulawula ukuphindaphinda kwazo kungenxa enkulu kunoma yini oyothola kwenye indawo. Konke okuhlanganiswe ohlelweni kuphephile & kwemvelo ... Okubaluleke nakakhulu, kusebenza ngempela. Uhlelo lwami akuyona into ezama ukulungisa le nkinga ngokufaka ama-hormone noma ukugwinya amaphilisi ... Ngendlela yami, uzokwazi ukuthola inkululeko ephelele kuma-cysts ama-ovari ngenkathi uvimbela ukuphindaphinda kwabo kanye nazo zonke izimpawu ze-PCOS ngendlela engaphansi kuka-8 amasonto.
Impi Yami Yokudabuka Kwesikhathi Eside Ne-Ovarian
Ngineminyaka engu-31 ubudala, ngibhekana nokuphila ngokugcwele. Izinsuku zami zazizinhle, zithatha imithwalo yemisebenzi emsebenzini, kuphela ukuza ekhaya futhi ngibe nemisebenzi eminingi; ukugijima kusukela emsebenzini ukuya emsebenzini; ukuthola isikhathi somlingani wami kanye neminye imikhaya yansuku zonke okufanele ihlangabezane nayo. Ukucindezeleka kwakukhuphuka, kodwa ngangilokhu ngilawula. Ngeshwa, lokho kwakuzoshintsha. Ngolunye ubusuku emva komsebenzi ngangiya endaweni yokudlela yasendaweni nabangani abathile. Ngemva kokuchitha amahora amathathu esitolo sokudlela, ehlezi eceleni komngani wesifazane, ngangizwa ubuhlungu bokugwaza esiswini sami esingaphansi. Ngacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi ngiyinto engiyidla futhi ngizizwa ngikhululekile njengoba ubuhlungu benciphile njengoba ngilala kulobo busuku. Ngakusasa ngangimangaza ukubona ukuthi ubuhlungu buba namandla kakhulu. Ngingacabangi okuningi, ngaya emsebenzini ngolunye usuku olumatasa ehhovisi. Ngangingazi ukuthi ukuphila kwami ​​kwakuzokwenza ukuphenduka okungalindelekile. Ezinsukwini ezimbalwa, lokho kuphumula nokuphumula esiswini sami kwaba buhlungu obonakalayo obubukhali obukhathazayo obulandelwa yisikhathi esingavamile. Ngezinye izikhathi, ubuhlungu bebuhlungu kakhulu kangangokuthi ubuhlungu ngangingakwazi ukulala. Kungakabiphi, ubuhlungu, obuhambisane nokuqeda ukuzwa okuqala ukusikhathaza kwaqala ukugaya izinzwa zami. Isisu sami sinomuzwa wokuthi wawuzoqhuma. Ngaphandle kokuba ngithathe isigxobo sababulali bezinhlungu, kungakhathaliseki ukuthi ngangizama ngani ukuthi ngingeke ngiphume kulolo buhlungu - imini noma ubusuku kwakukhona lapho, futhi kwase kuqale ukuthatha umonakalo. Kwabe sekufika izimpawu ezintsha zezimpawu: ukuvinjelwa okukhulu, ubulili obubuhlungu, izinkathi ezingabanjwanga nobuhlungu e-abs yami engezansi engavumeli ukuhamba.
Njengabanye Abaningi Abagulayo Bama-Ovarian
Thola, Izimpendulo Engizange Ngifune
Ukufunwa kwakungeke kube khona
Ukuhamba okumbalwa kudokotela nokuhlolwa okumbalwa, kodwa angizange ngihlungwe. Ngangigula futhi ngigula. Uhambo olwengeziwe kumsebenzi wami jikelele aluzange lwenze okuhle. Wacabanga ukuthi mhlawumbe kwakuwukuhlupheka nje kokuya esikhathini okubangelwa ukucindezeleka. Ngazama ukuphumuza okuningi futhi lokho kwangisiza (kancane), namanje ngangingeke ngikwazi ukukhipha lolo buhlungu obukhulu e-abs nasezindaweni eziphansi. Emasontweni amaningana kanye nokuvakashelwa okuphindaphindiwe kamuva, udokotela waqala ukusola ukuthi kukhona okungalungile ngempela futhi waqala uchungechunge lwezivivinyo ukuze akhiphe lutho olungathí sina. Ngemuva kokuthi ngibheke lokho okwakubonakala njengokungapheli kokuvivinya okungapheli kanye ne-ultrasound ekugcineni ngathola ukuxilongwa: i-cyst encane ye-ovarian. Ngiyabonga ekugcineni ukwazi ukuthi yini ebangela izimpawu zami - nobuhlungu bami obukhulayo - ngangiyesaba kepha ngazizwa nginesiqiniseko sokuthi ukukhululeka kuzoba maduze endleleni. Kwakungekho.
Ngemva kwamasonto ambalwa, ngahamba ngibona udokotela futhi ngichaza isimo esingenakubekezelela engangikhona, wayethembise ukulawula ukubeletha, ababulali obuhlungu nokulinda okubukhali. Akudingeki ukuthi, akuzange neze kusize. Ngaya ehhovisi likadokotela ngiya ehhovisi likadokotela ngifuna usizo - noma yikuphi ukukhululeka! Ubuhlungu bukhula kakhulu - nokukhathazeka kwami ​​ebusuku- futhi ngangidinga usizo! Ukuphila kwami ​​kwakungekho okwami. Angikwazi ukusebenza (ukulala ebusuku, ubuhlungu nokwesaba ukungakwazi ukukhulelwa noma ukuthuthukisa umdlavuza okwenza kube nzima ukubhekana nemithwalo yemithwalo yemfanelo eminingi ehhovisi). Ngangicindezelekile nomndeni wami, impilo yami yayihluphekile (angikwazi ukudla noma ukulala ngokujwayelekile); kanye nezinkathi ezingalindelekile ezingalindelekile, kwangenza ngacindezeleka kakhulu. Ngangifinyelela iphuzu lami lokuphuka futhi ngiyazi. Kwadingeka kwenziwe okuthile futhi kwakudingeka kwenziwe masinyane noma ngizolahlekelwa yingqondo yami. Kwakuyisikhathi sokuthatha isinyathelo!
Ukwelashwa Kubonakala Kuwukuphela Kokukhetha
Kwaphela inyanga eyodwa, ngase ngizame ukulinda ngilindile kodwa nge-secnd ultrasound engizithathile, ama-cysts ami e-ovaria akhule kakhulu. Ngesaba kakhulu. Udokotela wami wayesethi ngizohlinzwa ukukhipha i-cyst ukuvimbela izinkinga ezengeziwe esikhathini esizayo. Enye yalezi zinkinga kungaba ukungakwazi kwami ​​ukuba nezingane. Kungakhathaliseki ukuthi inqubo noma ukungasebenzi. Yeka ukukhetha okuhle! Ngaphansi, ngazizwa sengathi kwakukhona enye indlela, okunye okunye okunempilo.
Ngenhlanhla, kwakungadingeki ngithathe iseluleko sikadokotela wami. Ngemuva kwamasonto amahlanu okulandela ukudla okuqinile kokulinganisela kwe-hormonal kanye nokuthatha ezinye izithako ezenziwe ngamakhemikhali anikezwe ngumsoco, lelo cyst elikhulu elithile laphumile. Ngangijabule kakhulu, kodwa ngeshwa, injabulo yami yayiphile ngesikhathi ngisungula enye i-ovarian cyst 3 izinyanga emva kwalokho. Ngangibuhlungu kakhulu. Ngomzuzwana wonke amathemba ami ayephelile futhi umjikelezo ononya wokwesaba, ubuhlungu nokukhathazeka sekuqale futhi!
Ngemva kokuba ngiphinde ngitholakale ngifakwe nge-cyst eyandisiwe kodwa engabonakali futhi ngibona ukuthi ezinye izimo zami eziningi zazivela emthonjeni owodwa-i-PCOS, ngangikhubeka ngephutha incwadi ekhuthazayo eyayikhuluma ngemithi yemvelo engakwazi ukulinganisela ama-hormone, ukwandisa ukuzala nokuphulukisa ama-cyst ovarian ngokuphepha. Ngaleso sikhathi ngase ngiqalile umgwaqo omude, okhungathekisayo wecala nokuphambuka kuze kube sekugcineni ngigcine uhlelo oluphelele oluphelele nolwasetshenziselwa izinkulungwane zabesifazane ukuphatha ngokungapheli imbangela yama-cysts ama-ovari, kuhlanganise nomlobi ngokwakhe.
Iminyaka Engu-14 Yokufunda, Ucwaningo, Isivivinyo,
Ngenxa yalokho okuhlangenwe nakho kwe-ovarian cyst ebuhlungu kakhulu ngenza isifungo esibucayi ukuthi ... Kungakhathaliseki ukuthi kubiza kangakanani noma kuzothatha isikhathi esingakanani, ngizoyithola isisombululo sokuqeda ama-cysts ami angapheliyo ama-ovarian! Ngaqala isifiso esibucayi esabeka ukucindezeleka nokudumazeka kweminyaka engama-14 ... Ngesikhathi sokufuna i-cyst yami yama-ovari ngiphathwa yizinqwaba eziningi ze-M.Ds, ochwepheshe, abathintekayo, ama-naturopaths, ama-hydro-therapists, ngisho "nabaphilisi" . Ngaphezu kwalokhu, ngiphenyisisa ngokweqiniso izincwadi eziningi eziphathelene "nezempilo" kanye nokuzala, amaphephandaba wezempilo kanye nomagazini bezempilo ... futhi bachithe amahora amahora ngesikhathi besesha isifundo sezokwelapha esisodwa emva kwesinye. Futhi ngiphinde ngichitha amahora amaningi ngibheka ubuchopho "abaphilisa" noma "ochwepheshe" abahlukahlukene ngomuntu noma efonini. Uma kungekho okunye okusebenzayo, ngizama yonke imithi yokwelapha i-ovarian cyst engangithola izandla zami ... kufaka phakathi ama-creams amaningi, phezu kwamanani, amakhambi kanye ne-whatnot.
Yini Engiye Ngazama Ukuthi Ayisebenzi?
Uma lokho kungasebenzi ngangizama ukudla konke okwakuthiwa ukusiza ngama-cysts ama-ovarian, ngathatha i-aspirin, ngazama ukushisa ama-pads, amaphilisi okulawula ukuzalwa ukuze ngilawule isikhathi sami, ngazama ukudla kwe-Wai, i-vegetarianism, i-veganism, uhlobo lwegazi noma ukudla okuphansi kwe-carb, ama-macrobiotics ngisho nemithi ye-vitamin therapy ye-mega nayo yonke ikhambi le-herbal engingayithola. Ngiye ngazama nezindlela zokwelapha ezixubile, uMdabu waseMdabu waseShayina nezokwelapha. Lapho konke lokho kuhlulekile, ngizame i-hypnosis, i-visualizations, i-yoga nokuqinisekiswa. Kodwa naphezu kweminyaka eminingi yomzamo omkhulu ... ukunikeza i-cyst yami ye-ovarian i-quest YONKE inhliziyo yami nomphefumulo wami ...
Ngisabhekene Nokuhlupheka Okuphindaphindiwe
Ngemuva kokuba kungabikho ukwelashwa okungenhla okungabhekana nokuxazululwa kwama-cysts ami angapheliyo kanye nezibonakaliso eziningi ezihambisana nalesi simo noma zithinteka esimweni sami se-PCOS (ezinye izindlela zokwelapha zenza isimo sami sibi nakakhulu futhi impilo yami ejwayelekile yahlahlela).
Ngafika esiphethweni sokugcina sokuthi kwakungekho amaphilisi omlingo noma ukulungisa yonke imikhiqizo kuma-cysts ama-ovarian. Uma imbangela yangempela yama-cysts e-ovarian inganakwa, ama-cysts akho ama-ovaria azovame ukukhula amakhulu futhi adinga ukuhlinzwa noma aphinde avuselele ngokushesha.
Manje, Ngemuva kweminyaka engu-14 yokuCwaninga okuPhezulu
kanye nezilinganiso engizitholile ezingekho
Ngelinye ilanga kusihlwa, ngathola ulwazi olubaluleke kakhulu ngenkathi ngikhuluma nochwepheshe wezokwelapha ohlukile empumalanga kanye nodokotela ophelele. Ucezu lwolwazi lwangaphandle njengento engafanele engifuna ngayo. Ngathatha lolo lwazi futhi, kanye nolunye ulwazi oluyiminyaka engu-14 lwangolwazi engikuqoqile, lwakha uhlelo lokuphatha ama-cysts ama-ovari nama-PCOS nokuthuthukisa ukuzala. Ngilandela lolo luhlelo lwamasonto amahlanu futhi. . .
Ama-Cysts ami e-Ovarian ayedlulile futhi ayenayo
Angikaze Ngibuye Futhi Ngangibuye Ngisikhululekile Ekugcineni
Kuzo zonke Izimpawu ze-PCOS
Ngemva kokufunda le "qhinga" elisha elisha, konke ubuhlungu nokukhathazeka sekuphelile. I-ultrasound yami ayibonanga i-cyst futhi ngakhulelwa indodakazi yami yokuqala! Futhi impilo ayikwazanga ukuthola okungcono. Ngangikhululekile kakhulu. . . Isu elilula eliphelele livule umnyango wokuphila kwami ​​omusha futhi ombala kakhulu we-ovarian cyst. Uhlelo lwami lusebenze. Ekugcineni ngangizikhulula kuzo zonke izimpawu ze-PCOS futhi ngathola umntwana wami wokuqala! Ukukhulelwa kwami ​​kwesibili kuthatha okungaphansi kwenyanga ukufeza. Ngaleso sikhathi, eminyakeni eyishumi nesishiyagalombili emva kokuqala umsebenzi wami, ngase ngibe ngumzali oqhoshayo wezingane ezimbili ezinhle, ezinempilo. Ngangijabule kakhulu ukubona ukuthi izimpawu zami ze-PCOS zinciphile, futhi umjikelezo wami wokuya esikhathini waba njalo futhi. Indlela eya ku-ovarian cysts inkululeko ivuliwe!
USara uqeda i-Cyst yayo enkulu Ngaphansi
Kunamaviki angu-7 Ngemva kokulandela i-My
Uhlelo oluqinisekisiwe lwezinyathelo ezintathu
Nansi indaba ethandekayo ngomngane owayene-cyst enkulu kakhulu yama-ovari futhi wayekodwa ngesikhathi esidinga isidingo esikhulu sokuqinisekisa nokusiza. Ngashintsha igama lakhe lokuba yimfihlo. USara wayebhekene ne-cyst ye-ovary 13.5 cm enesifo esibucayi esivumelwaneni sakhe esifanele. Wabuye waba yisisulu sokuhlupheka okubuhlungu nsuku zonke nokukhathazeka. Wabuye welulekwa ukuthi athathe ukwelashwa kodwa njengendlela yokugcina futhi ngokuqondisa udokotela ophelele, ulandele uhlelo lwami lwesinyathelo esinezinyathelo nemingcele ethile. Ngamkhombisa indlela yokuguqula isimo sakhe ngokulandela indlela efanayo oyifunde ngayo. USara wazibophezela ekulandeleni uhlelo. Emasontweni angaphansi kwezingu-7 (kusukela ngo-5 Julayi kuze ku-Aug 20, 2012), i-cyst kaSara yayingekho (bheka ubufakazi ngezansi). KwaSara kwakuyinto yokushintsha impilo. Ngaqala loluhlelo ukuze ngihlanganyele ohlelweni lwami oluqinisekisiwe nabesifazane emhlabeni jikelele. Yonke into engayifundisa uSara futhi ngithole ekucwaningweni kwami ​​iyatholakala kuwe ngokushesha ngaloluhlelo oluhle kakhulu lwe-Ovarian Cyst Miracle.
13.5 cm I-Ovarian Cyst: USara Wendon
Izithombe ezingezansi ziyizithombe zikaSarah Wendon , 'ngaphambi nangemva', omunye wamakhasimende ami ase-Australia. Lezi zithombe zibonisa ukuthi ngokushesha futhi ngokuphawulekayo ama-cysts akho ama-ovari angaphula ngokulandela uhlelo oluphelele lwesinyathelo ngesinyathelo ngaphakathi kwe-Ovarian Cyst Miracle ™.
Ngithole kanjani abesifazane abangu-17 abaneminyaka eminingi
Ama-Cysts ahlala njalo ekhululekile?
Okulula: Ngisebenzise inqubo efanayo engizokuhlanganyela nawe. Lezi zindlela zazisiza abesifazane abangu-17 abane-cysts engapheli ukuze bathole inkululeko ephelele kuma-cysts ama-ovari nawo wonke ama-PCOS izimpawu unomphela. Ngithola izinhlamvu ezingenakubalwa, izingcingo ezivela kwabesifazane zingitshela ukuthi lolu hlelo luwenze kangakanani empilweni yabo. Eqinisweni i-Ovarian Cyst Miracle ineqoqo elikhulu kunazo zonke lobufakazi bokuqinisekisa ngesithombe kunoma yikuphi uhlelo lwe-ovarian yokwelashwa kwe-cyst online. Lokho kuphela okungafani okubalulekile okubeka le nkambo ngaphandle kwayo yonke into oyothola ku-intanethi. Umlando wethrekhi wokuletha njalo imiphumela!
Imiphumela yokuhlolwa kwami ​​yayimangalisa:
Awekho Ama- Cysts Ovariya (Kungakhathaliseki ukuthi Uhlobo noma Usayizi)
Awekho Ama- PCOS Izimpawu
Awunayo Ubuhlungu Noma Ukuvimbela
Awezikhathi ezifanayo ezingavamile
Ayikho i- Mood Enyukayo
Ukulahlekelwa Isisindo Sempilo Nokunciphisa
Impilo Ejwayelekile Ethuthukisiwe kanye Nekhwalithi Yokuphila
Ngakho-ke manje ngithatha isikhathi, ngiyifake futhi ngilungiselele uhlelo lokuqedela ukuqinisekisa ukuthi luzoletha imiphumela ephawulekayo kakhulu ehlala njalo. Kusukela ngaleso sikhathi izinkulungwane zabesifazane emhlabeni jikelele ziye zasisebenzisa ngempumelelo uhlelo lwami lwesithathu futhi zilahla ama-cysts azo ama-ovari ngokushesha, ngokuphepha, ngokwemvelo nangokuhle.
Indaba Ephumelelayo # 12: Tracy Pendergraft
"izikhathi zami zivamile futhi udokotela wami
Ngimangala ukubona ukuthi ama-cysts ami ayephumile masinyane. Nginguye
uzizwa kangcono kunanini ngaphambili. "
"Sawubona uCarol, ngiqale uhlelo lwakho ngalolu suku lukaSeptemba 2007 futhi kufanele ngithi ngimangele ngemiphumela. Izikhathi zami zivamile futhi udokotela wami wamangala ukubona ukuthi ama-cysts ami ayephumile masinyane. Ngiphinde ngithole encwadini yakho ukuthi ezinye zezinye izinkinga zami zezempilo zivela ku-PCOS. Ukuthungwa kwesikhumba sami sekubuye kwathuthuka futhi ngizizwa ngimangalisa ngokomzimba.
Uma ngikwazi ukwenza noma ubani angakwazi ... "
- Tracy Pendergraft, iminyaka engu-29, 2.4 "i-Cyst (eScotland)
Indaba Ephumelelayo # 13: Jeanne Lombardi
"Ngijabule kakhulu ukubika ukuthi ngingekho ovarian
ama-cysts ... futhi umuzwa jikelele awukholelwa. "
"Ngineminyaka engu-26 ubudala futhi ngathola ukuthi unyaka odlule nginezinhlobo eziningana ze-Ovarian Cysts. Ngangihluphekile (yebo! Ukuhlupheka ngempela isikhathi eside) futhi ngiye ngazama yonke imithi kadokotela ongayicabangela ukuphatha lesi simo esibi futhi ease the pain. I started your Ovarian Cyst Miracle system about 4 months ago and I am so excited to report that I am free from Ovarian Cysts. The pain is gone...completely! And the overall feeling is unbelievable.
Order Imigomo Privacy Disclaimer Site Map Affiliates Contact Us